Baby ebe nchekwa Book: The Photo Book Records Sweet Family Ikike icheta
> Resource> Atụmatụ> Baby ebe nchekwa Book Ideas: All banyere mbụ milestones
Inwe nwa ọhụrụ bụ pụrụ nnọọ iche maka papa m na mama m. Mgbe a mụrụ nwa ọhụrụ, a nne na nna na-abịa n'ụwa, kwa. Ọtụtụ nne na nna na-chebe ọ bụla oge nke mmepe milestones. Ma ihe bụ ụzọ kasị mma? Ma eleghị anya, a nwa ebe nchekwa akwụkwọ bụ azịza. Ọ na-enyere idekọ ụbọchị-eduga mụrụ nakwa dị ka kpukpru akpa milestones, dị ka akpa ọchị, akpa ochi, nzọụkwụ mbụ, akpa ije, na na.
N'ihi gịnị ka a Baby ebe nchekwa Book
1. Treasure maka a ndụ oge. Ezie na uwe na ụmụaka na-nyere pụọ, nwa ebe nchekwa akwụkwọ bụ ndị ka dị oké ọnụ ahịa akụ maka ezinụlọ. The etolitewo ike nwa maara ihe ha na-ele anya dị mgbe ka obere, na ndị nne na nna nwere ike agachi ndị ọ bụla nkọwa nke milestones.
2. Ikike icheta jikọọ ọgbọ. Ọ bụghị naanị na nwa ya ga-amasị na-ekiri na nwa na ebe nchekwa akwụkwọ, nne na nna ochie ịhụnanya, kwa. Na a nwa ebe nchekwa akwụkwọ, ha maara ọ bụla zuru ezu nke kpukpru akpa milestones. Nke a nwere pụrụ iche ọ pụtara maka nne na nna ochie bi n'ebe dị anya site na nwa. N'aka nke ọzọ, na nwa nwa pụrụ ịmụta ha na nne nne / nna m ochie na ndụ site nwa ọhụrụ ha na ebe nchekwa akwụkwọ ahụ!
3. Ụzọ ọzọ iji hazie nwa photos. A ga-ibu nke nwa foto, na onye ọ bụla yiri agaghị ekwe omume nye pụọ. A nwa ebe nchekwa akwụkwọ pụrụ ịba dị ọtụtụ dị ka nwa photos n'akụkụ mara mma decorations dị otú ahụ dị ka nwa ọhụrụ ịsa rịbọn, onyinye fụchie, òkù kaadị, wdg
Baby ebe nchekwa Book Ideas na aro
Mee ka a nwa ebe nchekwa akwụkwọ adịghị ike dị ka o yiri ka ogologo dị ka ị chọrọ na nwere ụfọdụ mapụtara oge. Na olileanya ndị a nwa ebe nchekwa akwụkwọ echiche na-enyere.
1. Họrọ a isiokwu. A isiokwu kpebie otú nwa ebe nchekwa akwụkwọ anya dị ka na ihe na-agụnye n'ime foto akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme na dijitalụ foto akwụkwọ software, ọ na-akọ na nhọrọ nke foto akwụkwọ template peeji nke. Ndị a gburugburu na-ewu ewu: egwuregwu, katuunu, music, Christmas, na na.
2. Tupu nwa. Ọtụtụ ndị pụrụ atụmatụ na-eme ka a na nwa na ebe nchekwa akwụkwọ mgbe nwa nwa. N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe tupu nwa ọhụrụ mụrụ ga-eti, na ultrasound foto na aru ego N'ihi ya, obi ụtọ na-eche nke okike (ọ bụ nwata ma ọ bụ na ọ bụ otu nwa agbọghọ?), Decorating akwalite ụlọ, na nwa ịsa. Nile, na ihe nile mere mgbe dum ezinụlọ na-echere ọhụrụ so ike gụnyere na nwa na ebe nchekwa akwụkwọ na mgbakwunye na nke mbụ milestones.
3. Photo na caption. Tinye ụfọdụ na-akpa ọchị captions ka photos. The nwa ebe nchekwa akwụkwọ bụ ebe na-eme ka onye ọ bụla na-achị ọchị, na igba obi ụtọ anya mmiri.
4. -Echeta nke ezinụlọ ya dum. Baby ebe nchekwa akwụkwọ idekọ na-echeta nke nwa mbụ, ma ị ga mma na-agụnye echeta ndị ọzọ so nwere nke nwa nke mere na ọ / ọ na-echeta afọ mgbe e mesịrị.
Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime oge a nna ya na nne enweghị ọtụtụ oge na-emefu na a nwa ebe nchekwa akwụkwọ, karịsịa mgbe ha na-enwe nwa mbụ ha. E nwere nnọọ ọtụtụ ihe na-amụta, na-elekọta na iji kwadebe. Dabara nke ọma, na enyemaka nke foto akwụkwọ software- DVD ngosi mmịfe Nrụpụta, ọ bụ nnọọ mfe ike a nwa ebe nchekwa akwụkwọ.
Olee otú Mee a Adalata na / si ngosi mmịfe
Olee otú Mee a ngosi mmịfe si jpg na JPEG Images